Soosaarayaasha Mashiinka iyo Warshadda | Shiinaha Soosaarayaasha Mashiinka Mashiinka
Qalabka dalxiiska ee la qaadan karo iyo qalabka yareynta cryolipolysis
3 ee 1 mashiinka waxqabadka badan waa nooc la qaadan karo, 40KHZ teknolojiyad cavitation, tikniyoolajiyad cryolipolysis, tikniyoolajiyad tipolar ah iyo lipo laser, natiijadu way cadahay, si wax ku ool ah ayay dufanka uga saareysaa.
6 ee 1 lipo mishiinka khafiifinta laser
Moodhalkan 6 ee 1 lipo laser mishiinka khafiifinta ayaa la casriyeeyay marka loo eego kim 8 nidaamka khafiifinta, wuxuu leeyahay ugu badnaan laba iyo tobanka polar rf, iyo xallinta hawlgalka ugu habboon, ku soo dhowow inaad soo dirto baaritaan si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah, waxaan kaaga jawaabi doonnaa si dhakhso leh.
360 oo ku xeeran mishiinka xayiraadda baruurta ee lagu xardho jirka
Moodalkan mashiinka khafiifka ah ee barafeeya baruurta qaboojiyaha ayaa la cusbooneysiiyay, wuxuu adeegsadaa tiknoolajiyada ku wareegsan 360 ee ku xeeran baruurta, afarta qaboojiyaha ee loo yaqaan 'cryo handle' ayaa isla shaqeyn kara, waxay badbaadin kartaa waqti daaweynta, natiijada khafiifinta waxay noqon doontaa mid deg deg badan oo waxtar leh sidoo kale wuxuu leeyahay cryo handle.
qabooji mashiinka qaboojiyaha baruurta leh ee cryo xaggiisa cufnaanta jirka
Moodalkan mashiinka khafiifka ah ee qaboojiya baruurta waa qaab la qaadan karo, xakamaynta baruurta ayaa shaqeyn karta isla waqtigaas, cavitation rf waxay sare u qaadi kartaa saameynta caatada ah, waxay sare u qaadeysaa yareynta baruurta.
Mashiinka khafiifa ee cryolipolysis
Mashiinka slimming Cryolipolysis wuxuu leeyahay 4pcs kala duwan cryo vaccum handle, cabir 100/150/200/300, aag kala duwan. Heerkulka hooseeya wuxuu baabi’iyaa dufanka wuxuuna dardar galiyaa dheef-shiid kiimikaadka, taas oo lagu gaarayo saameynta miisaanka oo yaraada, heerkulka oo hooseeyana ma yeeli doono waxyeello maqaarka iyo dhiig-bax la'aan.
5 Daaweynta Madaxyada Vacuum Rf Roller N8 Rakibka Vacuum
5pcs xamili mashiinka khafiifinta cavitation waxaa iska leh mashiinka duugista, sida ku xusan aag kala duwan, dooro gacan qabsiyo kala duwan, xammuulka ayaa la imanaya teknolojiyad faaruq ah iyo laser-ka RF, Dufankaaga burburi oo ka hor tag maqaarka jilicsan, dufanka lumiya iyo kor u qaad maqaarkaaga, kadib 2-3 daaweyn, waxaad heli doontaa natiijo muuqata.
Mashiinka khafiifka ah ee xaydha baruurta la qaadan karo
Kani waa mashiinka kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarrada 3 ee 1 mashiinka khafiifka ah, 40KHz xarkaha cavitation, xakamaynta baruurta cryo, lipo laser pads, kuwani waxay ka dhigi doonaan natiijada khafiifka ah mid ka sii fiican, waa mid leh tayo sare iyo qiimaha ugu fiican.